Imithi ephusheni ingazifakazela impilo yethu noma thina. Ngokuvamile babonisa isimo sethu noma izenzakalo ezungeze. Kufanelekile ukujika nokubonakala komuthi wephupho, amaqabunga, umqhele noma iminyaka yesihlahla, ngoba singasho okuningi.
Isihlahla esikhula emehlweni akho kulephupho sibonisa impumelelo yokudala okuyokunika injabulo. Izihlahla ezivundile ziyizinto eziphambili zenjabulo enkulu futhi esheshayo. Izindaba zakho zizohamba kahle futhi uzolindelwa inhlalakahle nenjabulo. Uma kunezithelo emthini, ithembisa ukuthi uphumelele ezimweni ezibucayi, kanye nenzuzo eyohambelana nobukhulu nobuningi bezithelo ezifikile kuwe. Ukuqeda izithelo ephusheni - ukuthola impumelelo ehlala njalo, okuzoholela ekuhlanganiseni isikhundla sakho. Ukutshala emithini yokuphupha kuwubuhlungu bokuhlelwa kwezinto ezithemba kakhulu.
Uma uphupha izihlahla ezinyanyekayo noma ezikhulayo - lokhu kusho ukuthi ulindele inkinga yokudala, ukudumazeka, noma yikuphi ukuphazamiseka emaphikweni nokuwa kwethemba. Ngezinye izikhathi iphupho elinjalo lingabonisa ukukhohlisa noma ukukhwabanisa, futhi abathandi kufanele balindele ukuhlukana kokuqala. Iziguli kanye nabantu asebekhulile, ukufa okunjalo okubhekiswe ekufeni kuyisiphetho esisheshayo. Isihlahla esibiwe noma esikudla esidliwa yizibungu esisho ukuthi ibhizinisi lakho lisesimweni esibi, usuke uthathwa kalula ezindabeni ezibucayi, ngakho-ke ungalindela ukulahleka.
Isihlahla esivuthayo ephusheni sixwayisa mayelana nokulahleka okungenzeka kulelo ndege noma ngezinto ezinzima ezingokomoya. Kulabo abathandayo, iphupho elinjalo lingaba yisixwayiso ngethonya eliyingozi lomdlandla kuzo zonke izici zokuphila. Ukulinda ebuthongweni besihlahla kubonisa usizi olujulile nolwazi oluzovela ngephutha lakho. Sika umuthi ephusheni - izenzo zakho ezingenangqondo zingaholela ekulahlekelweni kwenhlalakahle, impahla noma ukuthula emndenini. Ukuguqulwa ukulala esihlahleni sephupho kusho ukulahlekelwa okukhulu, ukwehla kwamathemba nezinhlelo. Ngezinye izikhathi i-tacoson ibikezela ikhefu ebuhlotsheni nomuntu.
Uma ukhuphuka umuthi, kusho ukuthi kulindeleke ukuthi ube nokuhlonipha okukhulu nokuphakama ngaphezu kwabanye, ukuchuma kwebhizinisi kanye nenjabulo enkulu. Yehla esihlahleni, kodwa ungalimazi - isixwayiso sengozi. Mhlawumbe udlulisele abantu abalulekile emgwaqweni futhi ungalahlekelwa indawo. Abamabhizinisi bakhipha isixwayiso mayelana nokulahlekelwa inzuzo nokuwa kwebhizinisi. Ukuphupha ipeni kukhuluma ngesisekelo sebhizinisi eliqinile. Futhi ngokuphambene nalokho, amaphupho aphulile enhlanhla enhlanhla enkampanini yebhizinisi. Ukulila inhlanhla kuzofika emva komzamo othile.
Tshala izihlahla ezincane ephusheni - ukubikezela izindaba ezinhle noma izengezo emndenini. Iphupho elikhulu lomuthi lokuzijwayeza ngomuntu onethonya ozayo oyokusiza kuzo zonke izinkampani. Ngokubona izihlahla eziningi eziqothukile ephusheni - ulindele izindaba ezinzima ezingeke zigcwaliswe ngendlela engcono kakhulu. Uma ume emthunzini wesihlahla ephusheni, uzofunda ukuthembela futhi ungafihli imizwa yakho yangempela.
Uma uphupha ukuthi umuthi omkhulu ukhula kusukela esiswini somkalamfowenu, ulinde ukuvela kwengane esikhathini esizayo ngubani ozolindela udumo, ingcebo nodumo.
Ukutshala noma ukutshala isihlahla kusho ukuchuma, injabulo yombuso. Futhi uma uzibona ngaphansi kwemikhakha yezihlahla ezindala ubudala, kusho ukuthi wena ngokwakho ungumakhi nomlondolozi wenjabulo yakho. Uma ubona umgodi emthini ephusheni - lokhu kudonsa umhlangano nomuntu onomusa kakhulu futhi oqotho. Ukuhamba phakathi kwemithi yezithelo ephusheni kuyathembisa inzuzo engalindelekile.
Uma umuthi we-beech uphupha umuntu, khona-ke kukhona ithuba lokushintsha engxenyeni yesibili. Esigulini leso siphupho sithembisa ukuchitshiyelwa kwempilo, kanti kumthengisi lelo phupho kuyinzuzo enkulu. Konke okunye, iphupho mayelana ne-beech liyisikhathi sokungabi nalutho okuyize, ukwethemba okukhohlisayo nemizamo engenamsebenzi. Umuthi wekhofi ungumngcwabo omncane futhi uhambo olumnandi, futhi umuthi onokhuni obomvu ubikezelwa ukuba ungene esimweni esingenathemba.
Ngokuvamile, izihlahla ezinqabile ziveza izenzakalo ezihlobene namakhono aphelele kanye nezenzo zengqondo. Ama-conifers axhunyiwe nhlobo, ngokuqondene nemizwa yethu, ithemba kanye nezifiso. Imithi yezithelo njalo ibhekisela kumphumela omuhle noma umphumela webhizinisi, futhi izihlahla ezishisayo noma ezingaphandle zikhombisa ukugcwaliseka kwezifiso noma ukuveza imizwelo.
Ukuthenga indlu ephusheni
Ushokoledi omhlophe oshisayo nge-strawberries no-ukhilimu omuncu omuncu
Ubuhlungu ngakwesokudla emanzini okhalweni
I-Jewel magic kuzinto ezintsha ze-Cartier Magicien
Ikhekhe le-Curd nge-strawberries
Indlela yokujabulisa abangane ngo-Eva Wonyaka Omusha
Imifino ekudleni komntwana
Yeka uhlobo lokudla okumele lukhethwe usana
Ingulube igoqa nge-ham ne-feta cheese
Imikhono nokunakekelwa kwe-decollete: amakhambi abantu